Uhlobo olusha lweFree Pascal 3.2.0 lufika futhi lezi izinguquko zalo | Kusuka kuLinux
Ngemuva kweminyaka emihlanu selokhu kwakhiwa inguqulo 3.0 kanye nokumenyezelwa komsebenzi kunguqulo entsha ngoSepthemba 2019, ekugcineni inguqulo entsha ye i-cross-platform compiler Mahhala Pascal 3.2.0. Le nguqulo entsha ingeza ingxenye enkulu yezinto ezintsha nezinguquko ekusetshenzisweni kolimi lwePascal, ngenhloso yokuthuthukisa ukuhambisana neDelphi.
Ngaphandle kwalokho futhi ukulungiswa kwamaphutha okujwayelekile nokusekelwa kwezakhiwo ezintsha nezinhlelo kufakiwe, njenge-AArch64, i-Linux, i-ppc64le, i-Android x86_64, kanye ne-16-bit Windows.
1 Mayelana Namahhala Pascal
1.1 Yini okusha kuFree Pascal 3.2?
Mayelana Namahhala Pascal
Kulabo abangazi, uFascal Free kufanele azi ukuthi lokhu ungumhlanganisi oqeqeshiwe wama-32-, 64- no-16-bit Pascal.
Yakhiwa njengomthombo ovulekile iminyaka engaphezu kwamashumi amabili nesikhombisa ngumphakathi omkhulu wabathuthukisi bokuzithandela abakhuthele kakhulu, yaziwa ngokuzinza kwayo okuphezulu, isivinini sayo sokuhlanganiswa kanye nekhodi yomkhiqizo esebenza kahle kakhulu.
Ingakhomba izakhiwo eziningi zeprosesaI-Intel x86 (kufaka phakathi i-8086), i-AMD64, i-x86-64, i-PowerPC, i-PowerPC64, i-SPARC, i-ARM, i-AArch64, i-MIPS, nomshini we-Java.
Izinhlelo zokusebenza ezisekelwayo zifaka phakathi I-Linux, FreeBSD, Haiku, Mac OS X, iOS, iPhoneSimulator, Darwin, DOS (16 no-32 bit), Windows 32, Windows 64, WinCE, OS / 2, MorphOS, Nintendo GBA, Nintendo DS, Nintendo Wii, Android, AIX kanye ne-AROS. Ngokwengeziwe, ukusekelwa kwezakhiwo ze-Motorola 68k kuyatholakala ekukhishweni kwentuthuko.
Ngaphandle kwalokho futhi iyahambisana IBorland Pascal 7, iDelphi, i-Think Pascal, neMetrowerks Pascal. Ngokufana, iLazaru IDE iyakhiwa, isuselwa kumhlanganisi weFree Pascal nokwenza imisebenzi efana neDelphi.
Yini okusha kuFree Pascal 3.2?
Njengoba ukuthuthukiswa kwegatsha le-compiler 3.0 kwahlanganisa iminyaka emihlanu, le nguqulo entsha inconyelwa kakhulu ukuthuthukiswa kwesikhathi esizayo. Kungenzeka kakhulu ukuthi ama-EDIs asuselwe kulo mhlanganisi (uLazaru, uCode Typhon) azonikela ngokushesha ngokuhlanganiswa kwawo.
Futhi yilezo zezindaba ezintsha ezithakazelisa kakhulu zalokhu kukhishwa okusha ziningi, njenge engeza ikhono lokuqalisa ukuhlelwa okunamandla kusetshenziswa i-syntax "[…]". Kanye ne ukusekelwa okusha kwemisebenzi ejwayelekile, izinqubo nezindlela ezingabophezelekile ezinhlotsheni zokuphikisana.
Ukusekelwa kwezikhala zamagama ezijwayelekile (ezizenzakalelayo) sezivele. Kungeziwe umnikazi webhulokhi uC lokho kufana nezindlela ezingaziwa eDelphi «.
Futhi ukuqaliswa okunwetshiwe kokuhlelwa okuguqukayo kuyaboniswa, Umsebenzi we-Insert () ungezwe ukufaka ukuhlelwa kwezinto nezinto ezithile kumalungu afanayo ashukumisayo, kanye ne-Delete () ukususa amabanga ne-Concat () ukuhlanganisa ukuhlelwa.
Izinhlobo zamarekhodi, opharetha be-Initialize, Finalize, Copy, ne-AddRef bayasetshenziswa.
Futhi, ungakukhohlwa lokho ukusekelwa kwamapulatifomu amasha nakho kufakiwe I-AArch64 (ARM64), i-Linux, i-ppc64le, i-Android x86_64, ne-i8086-win16 ingezwe kumhlanganisi.
Futhi ukukhumbula izikhala zamagama ezizenzakalelayo ukuthuthuka okulandelayo kungeziwe:
Ukuthuthuka okuningi maqondana nokuhlelwa okunamandla (faka, susa, ukuvumelana, opharetha wokufaka, izingqinamba, ukuqalwa kokuguqukayo ngokushesha nje lapho kumenyezelwe, abakhi).
$ Push and $ Pop directives extension for $ MinEnumSize, $ PackSet, kanye ne- $ PackRecords.
Isigaba se-threadvar isigaba ekilasini nasezimemezelweni zokurekhoda.
Ukuthuthukiswa nokwandiswa kwezinhlobo ezijwayelekile, noma yimikhuba engaphandle kwesigaba.
Ama-opharetha amasha okuphatha izinhlobo zamarekhodi (Qalisa, Kopisha, i-AddRef, Qedela).
Isandiso se-RTTI nohlobo lokusiza kokuhlangana kwento.
Amayunithi amasha: i-rtl-generics (i-generics), i-rtti (ngokuzama!), I-ProcessUnicode (inguqulo ye-Unicode ye-TProcess).
Isigaba se-TRegistry sihambisana ngokuphelele ne-Unicode.
Iphakheji ye-CHM ibhalwe kabusha ukuqeda izimbungulu nokwenza ngcono ukusebenza.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho Mayelana nalokhu kukhishwa okusha, ungabheka uhlu oluphelele lwezinguquko Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ngenkathi ngezinguquko ezithinta izinhlelo ezindala, ungabonisana nazo kusuka ku- isixhumanisi esilandelayo.
Kulabo abanentshisekelo yokulanda inguqulo entsha yale compiler, bangakwenza lokho ngokuya kusixhumanisi esilandelayo lapho bangathola khona izinhlobo ezahlukahlukene zomhlanganisi wengxenyekazi ngayinye esekelwayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » Uhlobo olusha lweFree Pascal 3.2.0 lufika futhi lezi yizinguquko zalo
ngenxa yokugxekwa kanzima, kuyihlazo ukuthi i-totem efana no-pascal yaxoshwa yi-yuck, java ..
+10 Angikaze ngithole isizathu esizwakalayo sokuthi iJava idalwe. Futhi ungabuzi nokugxekwa, ungaba noma uphikise, bekufanele nje ukuthi ufihle umbono wethu.
UMANUEL ANGEL GUTIERREZ MONTES kusho
Angikaze ngiyithole. Kuyingxoxo engibe nayo nozakwethu iminyaka engaphezu kwengu-30, yini uC ayinikezayo uPascal angayinikezi? Angikhulumi ngisho nangeJava
Konke ukumaketha okumsulwa, iMicrosoft eminyakeni engama-30 eyedlule yanquma ukuphatha umhlaba womhlanganisi, futhi phakathi kweVB neVC kwahlaselwa kanzima. Angikhulumi ngisho nangeJava….
Kwakunokuphatheka, uPascal wasungula eminyakeni engama-50 edlule umqondo wePVM (umshini wePascal Virtual) owawushiywe ngenxa yezizathu zokusebenza, futhi manje i-JVM ithengiswa njengesimangaliso sesishiyagalombili somhlaba ……. Yebo, ekugcineni ngikhulume ngeJava… ..
Phendula ku-MANUEL ANGEL GUTIERREZ MONTES
Uhlobo olusha lwe-IPFS 0.6 selukhishiwe futhi lezi yizindaba zalo